Naghachi foto ehichapụ na gam akporo ekwentị mkpanaaka | Akụkọ akụrụngwa
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ekwentị mkpanaaka ndị pụtara na afọ gara aga nwere ihe dị ezigbo mkpa nke na-eme ha ngwaọrụ anyị kachasị mma; anyị na-ekwu kpọmkwem banyere oghere igwefoto, nke oge ọ bụla nwere mkpebi dị elu karị ma ya mere, anyị nwere ogo onyonyo magburu onwe ya na nke ọ bụla nwere foto weghaara ngwa a.
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke gụnyere na ekwentị ndị a dị na ya ime na mpụga ebe nchekwa, Otu na ọnụ nwere ike na-anọchi anya a oké ike na-echekwa nile di iche iche nke ozi na otu nke na-anọchi, foto ndị na ma eleghị anya, anyị na-esi na-echekwa arduously. O di nwute, obere njehie nwere ike ime ka foto ndi a na faịlụ a n'ozuzu furu efu, n'oge nke oru nke igbalita naghachi ihe omuma a na udiri ngwa oru puru iche biara, ihe gha abu ihe nyocha n’isiokwu a.
Jiri Wondershare Dr Fone si Windows iji naghachi foto na gam akporo
Ọ gaghị abụ ihe ijuanya ịrụ ọrụ a, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị echee na ebe nchekwa dị n'ime ma ọ bụ nke mpụga nke ejikọrọ na ekwentị mkpanaaka abụghị naanị obere nchekwa nchekwa nke enwere ike ịgwọ dịka obere "diski ike". Ọ bụrụ na enwere ugbu a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ maka Windows nwere ike inyere anyị aka naghachi data site na draịvụ ike ma ọ bụ kaadị micro SD, ụfọdụ n'ime ngwa ndị ọzọ a nwere ike iji ihe okike iji nwaa naghachi na mberede ehichapụ faịlụ. Aha ngwa Wondershare Dr Fone nwere ike ime anwansi anyị ọ bụ ezie na, anyị ga-atụ anya na ọ bụghị n'efu.
Naanị ihe ịkwesịrị ime bụ jikọọ ekwentị mkpanaaka gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo na kọmputa site na eriri USB, ọnọdụ nke na-ekwesịghị ịnọchite ụdị nsogbu ọ bụla n'ihi Wondershare Dr Fone, nwere ikike mara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọnụ site na ndị nrụpụta dị iche iche.
Ozugbo anyị mechara ebumnuche a site na enyemaka nke ngwa ọrụ a, anyị ga-ahụ otu ngebichi yiri nke ahụ anyị debere n'elu. Otu ụdị obere onye inyeaka bụ nke anyị ga-enwe ike ịmasị, nke taabụ ole na ole na-akwado ya n'elu nke interface ya.
Ihuenyo nke anyị debere na akụkụ nke elu bụ nke ị ga - ahụ na njedebe ikpeazụ, ya bụ, nke dị na ya ị ga-enye ngwá ọrụ ikike ịmalite tupu nyocha ihe ịchọrọ ịchọta na ngwaọrụ mkpanaka; emesia ị ga - ahọrọ ụdị faịlụ ma ọ bụ ihe ịchọrọ ịchọrọ, nke ga - adabere na ihe ehichapụrụ na ekwentị mkpanaaka na mberede.
Dịka e gosipụtara na nseta ihuenyo dị n'elu, Wondershare Dr Fone pụrụ inyere anyị naghachi ọtụtụ ozi enwere ike ihichapụ na mberede, nke nwere ike ịbụ:
Ozi ndị ahụ.
Oku na-aga akụkọ ihe mere eme.
Ozi na mgbakwunye na WhatsApp.
Ihe oyiyi ihe osise.
Ihe odide nke ụdị dị iche iche.
Nwere ike ịhọrọ otu igbe ma ọ bụ karịa dabere na ihe ị chọrọ naghachi n'aka ekwentị gị ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ ha niile, a na-atụ aro ka ị jiri igbe dị na ala aka ekpe. Na mbipute n'efu nsonaazụ ga-egosi faịlụ niile ahụ ehichapụla na mberede mana enweghị ike weghachite ruo mgbe ị nwetara ikike akwụ ụgwọ.
Ngwaọrụ mkpanaka gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo na mbụ ọ ga-abụrịrị na ọ gbanyere mkpọrọgwụ, nke a ịbụ usoro dị mfe ịgbaso n'ihi ugbu a enwere ọtụtụ ngwa nke ahụ nwere ike inyere gị aka n'ọrụ a. Onye nrụpụta nke ngwa ọrụ ahụ na-egosi na enwere nnukwu ọ probabụ nke ịghachite ozi ahụ ehichapụ ọ bụ ezie na, ọ na-ekwukwa na pasent ụfọdụ nke ya "enweghị ike ịgbake."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu aga-esi nweta foto ehichapụ na mberede na gam akporo
3 Weebụ iji budata Gburugburu iji wụnye na Windows 10